काठमाडौ । उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र विशाल फाउण्डेशनले संयुक्त रुपमा नवप्रवद्र्धन प्रस्ताव आह्वान आयोजना गर्ने भएको छ । युवाहरुको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई नवप्रवद्र्धन प्रस्ताव आह्वान गरी संकलन गर्ने, उत्कृष्ट आइडिया पठाउने युवाहरुलाई उद्यमशीलता सम्वन्धी निशुल्क तालीम प्रदान गरी...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदावारी दर्ता गराएका छन् । ढकाल प्यानलबाट बस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ, जिल्लानगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र एशोशियट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन । बुधबार महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा...
काठमाडौ, कात्र्तिक ५ । निशानमोटर्सको बहुप्रतिक्षित “बिग, बोल्ड, ब्युटिफुल” बि–एस.यु.भि. म्यागनाइट अनलाइन मार्फत विश्वव्यापीरुपमा सार्वजनिक भएको छ । निशान मोटर्सको लागी नेपालको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटेकर्पले जनवरी २०२१ मा निशान म्यागनाइट लञ्च गर्ने पूर्व तयारी सुरु गरेको छ । यो “बिग, बोल्ड, ब्युटिफुल” एस.यु.भि.मा...
काठमाडौ, कात्र्तिक ५ । नेपाल टेलिकमले सोलुखुम्बुको विकट स्थान ताक्सिन्दु र जुभुमा जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ । टेलिकमका अनुसार गत असोज २९ देखि सञ्चालनमा आएको मोबाइल सेवामार्फत अब सो क्षेत्रका ग्राहकले कुराकानी गर्न र डाटा समेत चलाउन सक्नेछन् । यो भन्दा पहिले सो क्षेत्रमा कम्पनीको स्काई मोबाइलबाट मात्र सेवा...
नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको मूल्य बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन तोलामा ९५ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसअघि मंगलबार छापावाल सुनको मूल्य तोलामा ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९५ हजार कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी तोलामा १२४० रुपैयाँमा कारोबार...
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । चैतमै हुनुपर्ने निर्वाचन कोभिडका कारण रोकिएको थियो । नयाँ कार्यतालिका अनुसार आगामी मङ्सिर ११ र १२ गते ५४ औ वार्षिक साधारण सभाको मिति तोकिएको छ । साधारणसभाको अन्तिम दिन अर्थात १२ गते निर्वाचन हुनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः...
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरुले दशैंँबिदामा आफ्ना शाखाहरु न्खोल्ने भएका छन् । गत वर्ष बडादशैंका बिदामा समेत सीमित बैंकका काउन्टर खोलेर सेवा प्रवाह गरेका बैंकले यस वर्ष कुनै पनि बैंक नखोल्ने निर्णय गरेका हुन् । बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले सीमित शाखा खोलेर बैकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने...
काठमाडौ, कात्र्तिक ३ । मोबाइल एप रिचार्जरले बडादशैंलाई लक्षित गर्दै दशैं बोनान्जा, अफर भित्र अफर सुरु गरेको छ । आफ्ना प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै रिचार्जरले छुटै छुटको अफर सहित बोनान्जा सुरु गरेको हो । दशैंको किनमेल गर्नेहरुलाई सस्तो मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन रिचार्जरले कात्तिक १ गतेदेखि अफर सुरु गरेको हो । अफर अन्तरगत रिचार्जरबाट...
नेपाल बायुसेवा निगम र नेपाल पर्यटन बोर्डबिच सम्झौता भएको छ । आईतबार निगम र बोर्डबिच नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन सम्बन्धमा सहकार्य गर्नेगरी सम्झौता निगमले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल पर्यटन बोर्डबिच भएको यो सम्झौताले हाल कोभिड–१९ को महामारीका कारण...
नेपाल राष्ट्र बैंकले रु ११ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । सोमबार बोलकबोल प्रक्रियामार्फत टे«जरी बिल बिक्री गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । बिक्री हुन लागेको कूल टे«जरी बिलमध्ये रु सात अर्ब २० करोड गत वर्ष बिक्री गरिएको टे«जरी बिलको नवीकरण हो भने रु चार अर्ब नयाँ हो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार रु चार अर्ब...
गोर्खा ब्रुअरीमाथि नियोजित प्रहार, गुणस्तरहीन भनी भ्रम फैलाउँदै
गोर्खा ब्रुअरीले आफूहरुद्वारा उत्पादित विभिन्न ब्रान्डका बियर गुणस्तरहीन भनी भ्रम फैलाउने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सयौँ वर्षको इतिहास बोकेको ब्रान्डहरुमाथि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर गएर केही समूहले मिडियालाई प्रयोग गर्दै यस्तो भ्रम फैलाइरहेको गोर्खा ब्रुअरीका डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुरेन्द्र सिलवालले...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपभोक्तालाई सिङमा हरियो रङ भएका खसी, बोका, भेंडा, च्याङ्ग्रा जस्ता चौपाया खरीद गर्न आग्रह गरेको छ। बडादसैँका लागि काठमाण्डौ ल्याइएका निरोग खसी—बोका तथा भेंडा—च्याङ्ग्राको सिङमा हरियो र रोगीलाई रातो लगाइने गरेको छ। कामपा पशु सेवा विभागले मासुका लागि चौपाया बिक्रीवितरण हुने स्थानमा पुगी...
एनसेलले नारीका लागि ल्यायो ल्यायो 'गो सिम', परामर्श लिन ६० मिनेट निःशुल्क टकटाइम
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले महिलाहरुका लागि ‘अघि बढौं’ भन्ने थिममा आकर्षक सुविधाहरुका साथ ‘गो सिम’ ल्याएको छ । आकर्षक बन्डल सेवाहरु, हरेक रिचार्जमा बोनस, आपलकालिन अवस्थाका बेला पछि शुल्क तिर्ने गरी टकटाइम र एमएमएस सेवा लिन पाईने, निश्चित नम्बरहरुमा निःशुल्क कल सेवा लगायत थुप्रै सुविधाहरु भएको यो सिम महिलाहरुका लागि मात्र ल्याइएको हो...
होण्डा सिआर–भी १.६ टर्भो आइडीटीइसी २०२० बजारमा
काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा कारको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनीले स्टाइल, पर्फमेन्स र सुरक्षालाई समावेश गरी परिस्कृत पर्फमेन्स र शानदार इन्टेरियरस्का साथै नयाँ आइडीटीइसी इन्जिन युक्त नयाँ होण्डा सिआर–भी २०२० लाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ । “एडभान्स, एनरजेटिक एण्ड स्मार्ट” को ग्राण्ड कन्सेप्टमा निर्मित...
यस्तो छ राजनीतिले पेलिएको अर्थतन्त्रको अवश्था !
अरुण राज सुमार्गी, काठमाडौं । यत्रो परिवर्तनका बीचमा हामीले कतिको अर्थतन्त्रका बारेमा नवीनतम कार्यहरू ग-यौं भनेर हेर्ने हो भने आज पनि आदिम संरचनामा नै छौं । देशले राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि निकै नै कालखण्ड पार गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । लामो पञ्चायती व्यवस्थाको हाराहारी ३० वर्ष २०१६ बाट प्रारम्भ भएको सुधारिएको पञ्चायत...